देउबालाइ पद छोडाउने होइन, शक्तिशाली बनाऔं | himalayakhabar.com
देउबालाइ पद छोडाउने होइन, शक्तिशाली बनाऔं
- नारायण सापकोटा
8th Mar 2018, Thursday | २०७४ फाल्गुन २४, बिहीवार ११:१५
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले संसदिय दलको नेता चुनिएपछि फेरि कांग्रेस नसुध्रने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन् । जबकी देउवा अत्यधिक मत ल्याएर अर्का नेता प्रकाशमान सिंहसँग निर्वाचित भएका हुन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि कांग्रेसमा अहिले शक्तिशाली नेताका रुपमा देउवा उदाएका छन् । यो अवतार उनको लगातारको मिहेनत र धैर्यताले दिएको हो । पुर्खाले आर्जन गरेको ख्यातिबाट उनले यो पद पाएका होइनन । नत कसैसँग रगतको नाता जोडिएकै भरमा उनले पाएका हुन् ।
सूदूरपश्चिमबाट आएका एउटा सामान्य यूवा मिहेनत र धैर्यताबाट यो तहमा पुगेका छन् । शुरूका दिनको राजनीतिमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भटराईको आर्शिवाद देउवाले पाएकै हुन । गृहमन्त्री हुँदासम्म कोईरालाको आर्शिवाद देउवालाई थियो । त्यसपछिको राजनीति उनले आफ्नै वलबुतामा अगाडी बढाएका छन् । कतिपय समयमा त कोइरालालाइनै टक्कर दिएर उनी अघि बढेका छन् । दलभित्र र बाहिर प्रतिस्पर्धा गरेर उनले पद हासिल गरेका हुन । कसैले उनलाई दया माया गरेर पद दिएको होइन ।
कांग्रेस भित्र र सामाजिक संजालमा देउवाले अध्यक्ष पद समेत छोडेर यूवा नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पनु पर्ने धारणा देखिएका छन् । मानौं की देउवालाई चाँही कसैले यी पदमा मनोनित गरेजस्तो गरि उनलाई पद छोड्नका लागि दवाव दिन थालिएको छ । युवा नेता हूं भन्नेले भिडेर पद लिनूपर्ने हो नी किन मागेको होला ?
अब देउवा लगायतका नेताले पद छोडेर वस्नुपर्ने र यूवालाई अगाडी ल्याउनुपर्ने माग पनि सुनिन्छ । देउवाले छोडनुपर्ने किन ? अरुले कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउने दल बनाउन सक्छन भन्ने के ग्यारेन्टि छ ? प्रतिस्पर्धा गरेर देउवासंग पद खोस्ने प्रयास गरेको खै ? प्रतिस्पर्धा गर्न डराउने पद माग्ने काम यूवा नेतालाई सुहाउंदैन है ।
खासगरि युवा नेतालाई देउवाले पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग सुनिन थालेको छ । युवानेताले पद लिनका लागि देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषयलाई ओझेलमा राखिएको छ । कांग्रेसमा युवा नेताले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्न देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरे भैहाल्यो नी । देउवाले दान दिएर पद लिन खोज्ने त होइन नी ।
गिरिजाप्रसाद कोईरालासँग प्रतिस्पर्धा गरेर पटक पटक हार्दै हतोत्साही नभएर बसेपछि उनले नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष पद पाएका हुन । कसैले उनलाई यो पद टिका लगाएर दिएको होइन । अझ कोइराला समूह र आफ्ना समकालीन मित्र रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर उनले कांग्रेसको नेतृत्व पाएका हुन । कसैले दया, मायाँ गरेर उनलाई यो पद दिएको होइन । प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर पाएका हुन । अब उनले पद छोडनुपर्ने हो भने पनि प्रतिस्पर्धाबाट नै छोडने हो । उमेर, निर्वाचन परिणाम लगायतका कारणले देउवाले पद किन छोड्ने ? उनले छोडेपछि कांग्रेसमा सूधार हून्छ भन्ने ग्यारेन्टि कसैले दिन सक्छ ? यसको उत्तर कसैले दिन सक्दैन ।
देउवाले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, स्थानीय निकायको म्याद नथप्ने र कांग्रेस विभाजित गर्ने नकारात्मक काम गरेकै हुन । उनी अहिले त्यतिवेलाका देउवा होइनन् । किनभने उनले यसपटक तिनै तहको चुनाव गरेर देशलाई अगाडी बढाएका छन् ।
तर आफ्नो दल कांग्रेसलाई भने उनले बलियो बनाउन सकेनन् । दललाई बलियो बनाउन नसक्दा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवसर पनि देउवाले नै गुमाएका छन् । यदि कांग्रेसको वहुमत आउँथ्यो भने त उनी नै प्रधानमन्त्री हुन्थे नी । उनी यो रणनीतकि कौशलतामा चुकेका हुन । देउवाले चूनावी रणनीति अवलम्वन गर्न सकेका भए कांग्रेसका वहुमत पनि आउन सक्थ्यो होला । तर उनले त्यसो गर्न सकेनन् ।
जसरी एमालेले माओवादीसँग तालमेल गर्ने रणनीतिक चातुर्यता देखायो । त्यस्तै चातुर्यता देउवाले देखाउन सकेनन् । उनले कमजोरदलसँग तालमेल गरेपछि परिणाम सकारात्मक भएन । उनले ल्याएका नीतिका कारण यसपटक कांग्रेसले हारेको होइन । कांग्रेस पछाडी परेको एमाले र माओवादीको तालमेलले हो । अब यी दुइ दल एकताको नजिक पुगिसकेका छन् । यही बेलामा देउवाले पनि अर्को चूनावमा कांग्रेसले वहुमत ल्याउने रणनीति भने बनाउन जरुरी छ । देउवाले पद छोडिदिएर अरु कसैले कांग्रेसलाई अगाडी बढाउन सक्छ भन्ने विश्वास तत्कालका लागि गर्न सकिंदैन ।
कांग्रेसको सुधार यसको महाधिवेशनले गर्छ । कस्तो नेतृत्व ल्याउने भन्ने पनि महाधिवेशनलाई नै छोडिदिनुपर्छ । नेतृत्व लिन चाहनेले जनमत बनाउन सक्नुपर्छ र प्रतिस्पर्धा गरेर लिनूपर्छ । दाईले दान दिएर नेतृत्वमा जान खोज्ने होइन ।
कांगेस पछाडी परेपनि मुलुकुले स्थिर सरकार पाउनु सकारात्मक पक्ष्ँ हो । प्रतिपक्षमा कांग्रेस हुँदा अराजकता पनि कम हुन्छ । देशमा वन्द, हड्ताल पनि कम हुन्छन् । नेपालीले कम दुख पाउंछन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
यसैले देउवाले पद छोड्ने होइन , उनलाई शक्तिशाली हुनुपर्छ । देश र कांग्रेसको हित यसैमा छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको पुनः राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता
२०७४ फाल्गुन २४, बिहीवार ०४:५८
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई नै दोहोर्‍याउने निर्णय गरेपछि ...
सभामुखमा माओवादी केन्द्रका नेता महराको उम्मेदवारी दर्ता, कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिने
२०७४ फाल्गुन २४, बिहीवार २२:३८